Wikipedia talk:လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (အိုင်ဒီယာ) - ဝီကီပီးဒီးယား
Wikipedia talk:လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (အိုင်ဒီယာ)
ပြဿနာ အခြေခံ စာသင်ကြားမှု စနစ်[ပြင်ဆင်ရန်]
Problem-based learning ပြဿနာကို အခြေခံပြီး သင်ကြားရတဲ့ စာသင်စနစ်ဆိုသည်မှာ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေကို ရြှပ်ထွေးတဲ့ ကိစ္စများ၊ ကဏ္ဍများ၊ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနေရင်းနဲ့ ပြဿနာကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး သိရှိလာတဲ့ မသိကို ပေးတဲ့ စာသင်ကြားခြင်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Problem-Based Learning ကို အတိုချုပ် (PBL) လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီသင်ကြားမှုစနစ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေကို လူတိုင်းနဲ့ ဆက်ဆံနိုင်တဲ့ အသိဉာဏ် စွမ်းအား၊ ပြဿနာတွေကို လက်တွေ့ဖြေရှင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအား၊ လူပေါင်းစုံနှင့် အလုပ်တူတူလုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအား၊ သူများ(ဆရာ) ကိုအားမကိုးဘဲ ကိုယ့်ဖာသာ လေ့လာနိုင်တဲ့ စွမ်းအား၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် စိတ်ဓာတ် မြင့်တင်မနိုင်တဲ့ စွမ်းအား စတာတွေကို ရစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့အလုပ်တွေမှာ တွေ့ကြုံရမဲ့ အခက်မခဲတွေကို ကျောင်းမှာ ကြိုတင် သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို ပိုမို ထက်မြတ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ PBL မှာ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ကျောင်းဆရာ မဟုတ်ပါဘူး။ စာသင်ကြားပေးမယ့်သူလဲမဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းသားတွေကို ပံပိုးကူညီသူများ အဖြစ်သာလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကို ပြဿနာရဲ့ ပုံစံကို မြင်သာလာအောင် ကူညီပေးရမှာက PBL ဆရာရဲ့ အဓိက ကိစ္စပါ။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ သင်ယူနိုင်မှုကိုလဲ အမြဲ လေ့လာနေရမှာဖြစ်သလို၊ မေးသမျှကိုလဲ ဖြေနိုင်အောင် ဖြေရမှာပါ။ ကျောင်းသားတွေကိုလဲ မေးခွန်းတွေမေးပြီး ပြဿနာရဲ့ အဖြေကို သိသာထင်ရှားလာအောင် လုပ်ပေးရမှာက ဆရာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။
PBL မှာ အဓိက အချက် (၆) ချက် ရှိပါတယ်။
(၁) ကျောင်းသား အချင်းချင်း အပြန်အလှန် သင်ယူခြင်း။ (၂) အဖွဲလိုက် သင်ယူရခြင်း။ (၃) ဆရာတွေက ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးသူ သာဖြစ်ခြင်း(စာသင်ပေးခြင်းမရှိ)။ (၄) ပြဿနာတွေက ဖြေရှင်းနိုင်မှု စွမ်းအားတိုးတတ်စေရန် ဖြစ်ရမည်။ (၅) ပြဿနာတွေက စုပေါင်းမှု ပေါ်အခြေခံပြီး၊ သင်ကြားမှုကို တိုးပွားစေရန်။ (၆) မိမိဖာသာ လေ့လာပြီး အသိဉာဏ်များ တိုးလာစေရန်။
I just wanna add some facts in Kyarpauk photo and to link with article Han Htue Lwin. Just like Mathew Tuck photo. Please, help. User: Kyawin Naing
မူရင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆောင်းပါးသည် ရှည်လွန်းမက ရှည်နေပါပြီ၊ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ခရီးသွားတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ရေးဖို့ ‌တော်တော် များမှာ ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ သူများတွေလည်း ထပ်ဖြည့်ချင် ဖြည့်လိမ့်မယ်၊ အဲအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး သပ်သပ် ခေါင်းစဉ် တပိုင်း ခွဲထုတ်သင့်ပြီလို ထင်ပါတယ်၊ (တေဘယ်လေးတွေနဲ့ သပ်ရပ်အောင် ရေးမလား?) အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးစဉ်များလို့ နောက်တပိုင်း ထပ်ရေးဖြည့်သင့်ပါတယ်။ ပြီးမှ မူရင်းဆောင်းပါးမှာ ခေါင်းစဉ်ခွဲကလေး ထည့်ပြီး ပြန်ညွှန်းသင့်ပါတယ်။ --ဆန်လုံးတီး (ဆွေးနွေး) ၀၃:၀၆၊ ၁၂ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးစဉ်များ လို့ သပ်သပ်ခွဲရေးနိုင်သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေ့စွဲမှတ်တမ်းများ ထဲမှာလည်း ရွှေ့ပြောင်းဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၁၂၊ ၁၂ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_talk:လက်ဖက်ရည်ဆိုင်_(အိုင်ဒီယာ)&oldid=370972" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဇွန် ၂၀၁၇၊ ၀၄:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။